ဖူးပွင့်ဝေဆာ Flowers | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home & Garden » ဖူးပွင့်ဝေဆာ Flowers	17
Posted by Ma Ma on May 13, 2015 in Home & Garden, My Dear Diary, Photography | 17 comments
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ကလောရောက်တော့ အဲဒီကရာသီဥတုနဲ့ ပန်းတွေ အရောင်စုံ အမျိုးစုံ (မမြင်ဖူးတာတွေအများကြီး) တွေ့လို့ ရိုက်လာခဲ့တယ်။
အရင်ကဆို ပုံဆိုဒ်တွေကို ချုံ့ပြီးမှတင်ပေမယ့် ပန်းပုံလေးတွေဆိုတော့ လှတပတခံစားရအောင် မူရင်းအတိုင်းပဲ တင်လိုက်ပါတယ်။ ခိုင်ဇာ ရဲ့ Fuchsia ပန်းကိုကြည့်ပြီး ………….
၁၁ ကျပ် ကျတဲ့ပန်း
ပန်းက ၁၁ ကျပ်ပေးရတယ်လို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။
စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ပုံ ဇောက်ထိုးပွင့်နေလို့ ၁၁ကျပ် ကျတဲ့ပန်းလို့ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် နာမည်ပေးထားလိုက်တာ။ ဒါကတော့ ဂန္ဓမာပန်းလို့ ထင်တာပဲ။
သွေးသောက်ညီအမရဲ့ နည်းနဲ့ နာမည်ပေးရရင်တော့ ပန်းဝါ ပေ့ါ။ နှင်းဆီနီနီ မလှဘူးလား။
ရန်ကုန်မှာမြင်ဖူးတဲ့ အပွင့်တွေထက် ၂ဆလောက်ကြီးတယ်။ နှင်းဆီဝါ၀ါ (၁)
ပန်းတစ်ပွင့်ထဲကိုပဲ angel ၂မျိုးနဲ့ ရိုက်ထားတာ။
ဘယ်လိုရိုက်ရိုက် ပန်းလှသလောက် ပုံကသိပ်မလှတာတော့ ကင်မရာမန်းကြောင့်ပဲ။ ပန်းဖြူ
ပန်းနာမည်မသိလို့ သွေးသောက်ညီအမနည်းနဲ့ ပေးလိုက်တဲ့နာမည်ပေ့ါ။ ဒါကလည်း တမျိုးပေ့ါ။
အိုးထဲထည့်စိုက်ထားတဲ့ ပန်းရောင်လေး။ ဒါကတော့ ဒေသမျိုးပေ့ါ။
ဒါကတော့ ပန်းချဉ်ပေါင် တဲ့။
ပန်းနီနီကို တပွင့်ထဲ အနီးကပ်ရိုက်ထားတာ။
ဒါကတော့ ပန်းနီနီ ခြုံလိုက်။
ကလောရဲ့ ရာသီဥတုက မြေပြန့်မှာပွင့်တဲ့ တရုတ်စကားပန်းလည်း ပွင့်တယ်။
လေးကျွန်းကြာခိုင်တွေလည်း အနီရောင်တစ်မျိုးပဲ ရိုက်လာမိပေမယ့် အရောင်စုံရှိတယ်။
ခြုံလိုမျိုး အပင်တွေမျိုးစုံ စိုက်ထားတာ၊ ပန်းမျိုးစုံ အရောင်မျိုးစုံ ရောနှောပွင့်နေတာ။
လမ်းဘေးတလျှောက်မှာ ပွင့်နေတဲ့ ခရမ်းရောင်ပန်း။
ဇွန်းဆွဲပြီး ကားသွားတုန်း ရိုက်လာတာမို့ ဒီလောက်ပုံရတာတောင် ကံကောင်း။
ကလောမြို့မဈေးရှေ့မှာ ပန်းပင်မျိုးစုံ အရောင်းဆိုင်လေးတွေရှိတယ်။
အတူသွားတဲ့သူတစ်ယောက်ဝယ်လာတာ အပင်မျိုးစုံ ကျန်ကျောင်းအိတ်နဲ့တစ်လုံးကိုမှ ၆၅၀၀ ပဲ ပေးရတယ်။
ကိုယ်လည်းသွားဝယ်ရော တစ်ပင် ၂၀၀၀ ၃၀၀၀ ကနေ တစ်ပင် ၂၀၀၀၀ လောက်ထိ ခေါ်တာနဲ့ ဘာပင်မှ ပါမလာဘူး။ About Ma Ma
ခင်ဇော် says: လှလိုက်တာ လှလိုက်တာ…..
ဖူးးရှားးး က ရှမ်းးပြည်မှာ ရှိသကိုးးးး
ရတနာရွှေအုပ်ကို ချင်းးသစ်ခွ ဆိုလားး ဖယောင်းးသစ်ခွ ဆိုလားး ခေါ်သေးးတယ်
ခြုံ လိုမျိုးးနဲ့ ပွင့်တဲ့ ပန်းး လေးးတွေ က တဂျီးး စာရင်းးထဲက တစ်ခု နဲ့ တူတယ်။ ကျော့် ထဲမှာ ရှိတယ်။ တူမတူပြန်ရှာလိုက်အူးးမယ်။
လမ်းးဘေးး မှာပွင့်တဲ့ ပန်းး ခရမ်းးက စိန်ပန်းးပြာခေါ်တယ်မို့လားး
Ma Ma says: ရတနာငွေအုပ်က အဆုပ်လိုက်ပွင့်တာ။
လမ်းဘေးမှာပွင့်တဲ့ ခရမ်းရောင်ပန်းကလည်း အပင်ကြီးပေမယ့် အပွင့်သေးတယ်။
ဇော်မွှားပန်းလိုမျိုး ပွင့်ဖတ်က သေးသေးလေးတွေ။
ခင်ဇော် says: ဟုတ်လားး
အာ့ဆို ရတနာ ငွေအုပ်ပန်းကို မှတ်ထားလိုက်ပြီ။
ဟို ခရမ်းရောင်က ပျဉ်းမ ပန်း နေမှာ။
Ma Ei says: ဒါကတော့ ဂန္ဓမာပန်းလို့ ထင်တာပဲ။ …ဆိုတဲ့ပန်းဝါ၀ါလေးက ဒေလီယာ…
လမ်းဘေးတလျှောက်မှာ ပွင့်နေတဲ့ ခရမ်းရောင်ပန်း။… ဆိုတာက စိန်ပန်းပြာ…
ပန်းဖြူ… ပန်းမျိုးစုံ အရောင်မျိုးစုံ ရောနှောပွင့်နေတာ။…လေးတွေက ဂန္ဒမာမျိုးရင်းလေးတွေ…
Ma Ma says: ဖဘမှာ သစ်ခွစိုက်ကြမယ်ဆိုတဲ့ ဂရုရှိတယ်။
အဲဒီမှာဝင်ကြည့်ရင်းနဲ့ ကလောသွားရင် သစ်ခွတွေ ၀ယ်မယ်လို့ မောင်းတင်ပြီးသွားတာ
ဧည့်သည်ဆိုပြီး ဈေးတင်ရောင်းတာနဲ့ စိတ်တိုပြီး တစ်ပင်မှပါမလာဘူး။
အောင် မိုးသူ says: ရတနာငွေအုပ်တဲ့လား ရွှေကွက်လို့လည်း ခေါ်တာ ကြားဖူးသလားလို့။
Ma Ma says: ရတနာရွှေအုပ်ဆိုတာ ရတနာငွေအုပ်နဲ့တူပြီး ပွင့်ဖတ်အ၀ါရောင်တမျိုးကို ပြောတာထင်တယ်။
Mike says: .ဒီတစ်ခါ ပန်းပုံလေးတွေတော်တော်လှပါတယ်
.ပန်းဖြူ ဆိုတာ ဒေစီပန်းထင်ရဲ့
Ma Ma says: ဘရာသာမိုက်ရေ….မြောက်သွားပြီ။
Alinsett @ Maung Thura says: .ရောက်ဖူးပြီးတော့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မြင် သိ ခံစားချင်တယ်
Ma Ma says: ရောက်အောင်သွားလိုက်ပါ ဆက်ဆက်ရေ။
လမ်းတွေကောင်း ကားတွေကောင်းလို့ Express ကားနဲ့ ဆိုရင် ညသွား မနက်ရောက်တယ်။
ဒီမှာပူပြင်းအိုက်စပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကလောမှာ အေးစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့ နေလို့ကောင်းတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: အဲ့ဒီ့ ဒယ်အိုးထဲက မြို့ကလေးကို ပြန်မရောက်ဖြစ်တာ ဘာလိုလိုနဲ့ ဆယ်နှစ်တောင် ရှိတော့မှာပါ့လား…
♫♫ ငယ်ရည်းစားလေး အခုဆို .. .ဘယ်သူတယောက်နဲ့ နှဖူးစာလည်….♫♫
Ma Ma says: အားပေးသွားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပန်းတွေရိုက်နေရင်းတောင် မောင်ဂီ့ကို သတိရမိသေးတာ။
မောင်ဂီသာ ရိုက်လိုက်ရရင်လို့…….. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: နှင်းဆီနီ နဲ့တရုတ်စကား ကို ကြည့်ရတာ အပြင် ကို တကယ် ထွက်လာမလို 3D ပုံစံ နဲ့။
တို့ ချစ်မမ ရိုက်ချက် က စွမ်းသကွာ။ :-))
Ma Ma says: သွေးသောက်ညီအမတွေလို့ မပြောရဘူး အကောင်းချည်း မြင်ပေးလို့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: ပန်းလေးတွေ လှလိုက်တာ။
ကင်မရာဝူးမင်းရဲ့ လက်ရာကလည်း တက်လာပါပေ့။
Ma Ma says: ရမ်းသမ်းပြီး ရိုက်လာတဲ့ ပုံတွေအများကြီးထဲကမှ မနည်းရွေးပြီး တင်ထားတာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.